‘जनयुुद्ध जनगणतन्त्रका लागि गरिएको थियो, हामी यो संविधान स्वीकार गर्दैनौँ’– मोहन बैद्य किरण
माओवादी आन्दोलनलाई ध्वस्त पार्ने सड्यन्त्र भएको खुलासा
प्रकासित मिति : २०७७ मंसिर ८, सोमबार प्रकासित समय : ०९:३८
१) तत्कालीन सात राजनीतिक दल र माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १४ वर्ष बितेको छ । तर शान्ति प्रकृयाका महत्वपूर्ण काम अझै टुंगोमा पुग्न सकेको देखिदैन । यसको मुख्य कारण के देख्नुहुन्छ ?
– १२ बुँदे लगायत जे जति सम्झौता भएका छन्, ती गलत तरिकाले भएका छन् । ती सम्झौताहरु देश र जनताको हितमा देखिएनन्, जसको परिणाम शान्ति प्रकृया अझै टुंगोमा पुग्न नसकेको हो ।
२) गणतन्त्र, नयाँ संविधान, माओवादी लडाकुको व्यवस्थापनजस्ता कामलाई उपलब्धिका रुपमा लिन सकिए पनि संक्रमणकालीन न्याय र आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरणको काम अपेक्षाकृत ढंगले अघि नबढ्नुमा कसको कमजोरी हुनसक्छ ?
–हामी त यो संविधान पनि स्वीकार गर्दैनौँ । किनभने १० वर्षको जनयुद्ध यो खालको संविधान बनाउनका लागि गरिएकै थिएन । नयाँ जनवादी जनगणतन्त्रका लागि जनयुुद्ध गरिएको हो । शान्ति प्रकृयाको केही भागमात्रै नभएर समग्र राष्ट्रियता र जनजीविकाको सवाल पनि सम्बोधन भइरहेका छैनन् । किन यस्तो भयो भन्ने प्रश्नमा गलत ढंगले सम्झौता गरियो । पार्टीका साथीहरु गलत ढंगले अघि बढे । आत्मसमपर्णवादी नीति लिएर उनीहरु अघि बढे । त्यसै कारण यो विषय लम्बिँदै गयो ।
३) गलत ढंगले सम्झौता भयो भन्नुभयो । के के विषय गलत थिए त ?
– प्रस्टै छ नि । हामीले जनयुद्ध नयाँ जनवादी राज्यसत्ता स्थापना गर्नका लागि भनेका थियौँ, त्यो त भएन । गलत त्यही भयो । यस्तो संविधान बनाउन भनेर हामीेले जनयुद्ध गरेका थिएनौँ । यो त पुरानै संसदीय संविधान भयो । जब हामी पुरानो संविधानविरुद्ध आन्दोलन गर्छौँ अनि घुम्दै फिर्दै फेरि त्यही पुरानै संसदीय व्यवस्थामा सम्झौता गर्छौँ भनेपछि हाम्रो लक्ष्यअनुसारको यात्रा भएन ।
४) शान्ति सम्झौतापछि केही उपलब्धि नै नभएका हुन् र ?
– आंशिक सुधार र उपलब्धि भए त्यो निश्चित कुरा हो । तर समग्र उपलब्धि हुन सकेन ।
५) तत्कालीन माओवादी छिन्नभिन्न भए पनि त्यसको ठुलो हिस्सा अहिले सरकारकै नेतृत्वकर्ता बनेको छ । यस्तो अवस्थामा शान्ति प्रकृया टुंगोमा पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्न ?
– तपाइले मेरो कुरा गर्नुभएको होला । ममात्रै होइन, हाम्रो पार्टी यो सबै प्रकृयाबाट अलग भयो । यो कुरा सबैलाई थाहा भएकै हो । दोस्रो कुरा, साथीहरुलाई यो तरिकाले जानु हुँदैन भनेर हिजो प्रचण्डजी र बाबुरामजीहरुलाई त्यसबेला पनि हामीले भनेकै हो । तर, उहाँहरुले मान्नुभएन र त्यो तरिकाले जानुभयो । अहिले आउँदाखेरि त यो सरकारकै हालत के छ भन्ने देखिएको छ । झण्डै दुई तिहाइ बहुमतको सरकार भन्ने तर आफ्नो खुट्टा आफै काट्ने सरकार भयो यो । अरुले विरोध नै गर्नुपरेन । त्यहीँ भित्रको अन्तरविरोध र कलह हेर्दा यो सरकारले केही गर्न सक्छ भन्ने लाग्दैन र चल्दा पनि चल्दैन । यो सरकारले त जनतालाई धोका दिने खालको कुराहरु हो त्यो, धोका दिइरहेको छ । त्यसकारण यो सरकारसँग कुनै पनि प्रकारको आशा, अपेक्षा गर्न सक्ने स्थिति नै छैन ।
६) शान्ति प्रकृया टुंग्याउनकै लागि ढिलै भए पनि सत्य निरुपण र मेलमिलाप आयोग गठन भए । तर दुवै आयोगले लामो समयसम्म पनि काम गर्न सकेको देखिँदैन । यसमा आयोगको कमजोरी हो वा राजनीतिक दलहरुको हस्तक्षेप ?
– यसमा आयोगको कमजोरीभन्दा पनि आयोगमा रहेका अधिकारीहरुले के भनेका छन् ? त्यो बुझ्न पर्छ । उनीहरु सवैले आयोगलाई काम गर्नका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरिएन भन्ने गुनासो पहिल्यैबाट उठेका हुन् । यसले कानुन बनाउनतिर नलागिएको प्रस्टै छ । काम गर भन्ने अनि आवश्यक कानुन नबनाइदिने गरेपछि आयोगले कसरी काम गर्ने ? त्यसकारण आयोगलाई दोष दिने ठाउँ नै छैन । दोष कहाँ होे भने कानुुन बनाउने प्रक्रियामा लाग्नुपर्ने, त्यसतर्फ ध्यानै दिइएन । सरकारकै कुरा गर्दा प्रचण्डजी र बाबुरामजीको नेतृत्वमा पनि सरकार बने । तर त्यसतर्फ उहाँहरुको ध्यानै गएन ।
अहिलेको सरकार त झन् प्रचण्डजीहरुको बहुमतकै सरकार हो तर कानुन नै बनाइएन । यो प्रक्रियाका लागि म आफैले हाम्रो पार्टीका तर्फबाट प्रचण्डजीहरुसँग धेरै कुरा गरेँ । ओलीजीहरुसँग पनि गरियो । त्यस्तै, मानवअधिकारवादी विभिन्न राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरुले सत्यनिरुपण र मेलमिलापका काम हुन सकेका छैनन्, संक्रमणकालीन न्यायको समस्या छ भनेर बारम्बार कुरा उठाइ पनि रहेँ । तर कसले रोक्यो भन्दा सरकारमा जो छ, उनीहरुले नै रोके । अरुलाई त दोष दिने ठाउँ नै छैन । आयोगको हात मजबुत बनाइदिएको भए आयोगले काम गथ्र्यो । त्यसकारण आयोगको कुरा गौण हो, यो सरकारले नै अड्काएर राखेको हो । त्यसैले सम्पूर्ण जिम्मेवारी पनि सरकारले नै लिनुपर्छ ।
७) तपाईंको विचारमा सरकारले यो प्रक्रिया अड्काएर राख्नुको रहस्य के हुनसक्छ त ?
– यो रहस्यका बारेमा के भन्ने र ? यो लहरो तान्दा पहरो गर्जिन्छ । आखिरमा सबै चिजहरु हेर्दा सम्पूर्ण नेपालको माओवादी आन्दोलनलाई ध्वस्त पार्नका लागि यो षड्यन्त्र भइरहेको छ भनेर बुुझ्नुपर्छ ।
८) तपाईंले शुरुमा गलत ढंगले सम्झौता गरियो भन्नुभयो, के माओवादीहरु गलत दिशाबाट शान्ति प्रकृयामा आएका हुन् भन्ने तपाईको बुझाइ हो ?
– शान्ति प्रकृया गरिएका बेला हामी जेलमा थियौँ । जुनबेला हामी छुट्यौँ, यी सब कुरा भइसकेका थिए । हामी आएपछि ‘गलत तरिकाले भयो है यो’ भनेर पार्टीभित्र त राख्यौँ तर साथीहरुले मान्नुभएन । हामी केही समय सँगसँगै पनि बस्यौँ, सच्चाएर जान सकिन्छ कि भनेर । त्यसबेला माओवादीका तर्फबाट सच्याउने केही कोसिस पनि भएको हो तर कहाँनेर कोसिस पुगेन भने त्यहाँ कानुनका ज्ञातासँग पनि कुरा भए । कुरा हुँदा सत्यनिरुपण र मेलमिलाप गराउने कुरामा कानुनी प्रावधान मिलाइएन भन्ने नै तर्क आए । जुन आयोगहरु बने, उनीहरुको पनि पर्याप्त कानुन भएनन् भन्ने नै छ । अब माओवादीमाथिका मुद्दा मामिलाहरु सत्यनिरुपण र मेलमिलाप आयोगले टुंगो लगाउने भनेर भनिएको हो । तर नियमित प्रक्रिया जस्तै अदालतबाट टुंग्याउने कामहरु भइराखेको हो । अदालतबाट टुंग्याउने काम भयो भने त्यो प्रक्रियालाई पूरा गर्नका निम्ति सरकारमा बसेका सबै दल र सरकारमा गएका पूर्व माओवादी साथीहरुले गल्ती गरेको हो । यो अड्काउन नै चाहेको हो । त्यही भएर केही काम भएको छैन ।
९) नेपालको शान्ति प्रकृया टुंगोमा पुग्न नदिन विदेशीहरुको चलखेल पनि भइरहेको छ भनिन्छ नि ?
– विदेशीको चलखेल त यसै छ उसै छ । विदेशीको चलखेल शान्ति प्रक्रियाका विषयमा मात्रै भन्ने कुरा होइन । नेपालमा १४ वर्ष अघिको शान्ति प्रक्रिया हुनुभन्दा अघि पनि चलखेल थियो । अहिले शान्ति प्रक्रियासँग नजोडिएका कुराहरुमा पनि भइरहेको छ । लिम्पियाधुरामा भारतले अतिक्रमण गरेकै छ । अमेरिकाको एमसीसी ल्याउन शान्ति प्रक्रियासँग के मतलब रह्यो र ? कुरा के हो भने माओवादीहरुसँग बदला लिन यसरी हलो अड्काइएको हो ।
(बैद्यसँग पत्रकार फडिन्द्र नेपालले रातोपाटी डटकमका लागि लिएको यो अन्तर्वार्ता लिएका हुन । यो समय सान्दर्भिक रहेकोले हामीले यहाँ साभार गरिएका छौं । साथै त्यसमा शीर्षक हामीले चयन गरेका हौं ।)